नवलपुरमा लागुऔषध मुद्धा सबैभन्दा धेरै, १ सय २२ जना पक्राउ -
कावासोती, ५ असार । नवलपुर जिल्लामा सबैभन्दा बढी मुद्धा लागुऔषध सम्बन्धी रहेको पाईएको छ । आ.व. ०७५÷०७६ मा कुल ८६ वटा लागुऔषध सम्बन्धी मुद्धा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए ।
प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार लागु औषध ओसारपसार , बेचविखन र सेवन समेत गरि ८६ वटा मुद्धाा दर्ता भउका हुन् । आ.व. ०७४÷०५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लागुऔषध सम्बन्धी ६९ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । आ.व. ७५÷७६ मा दर्ता भएका ८६ मध्ये ६४ वटा मुद्धा फछर्योट भइसकेका छन् भने २२ वटा मुद्धाा किनारा लाग्न बाँकी छ ।
लागु औषध सम्बन्धी मुद्धाका १ सय २२ जना एक बर्ष भित्र पक्राउ परेका छन् । ति मध्ये २ जना महिला रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा नवलपुरबाट प्रहरीले ५ हजार ४ सय ७१ थन ट्याव्लेट , २ सय २ वोटल फेन्सेडिल र ८०० गाँजा वरामद गरेको छ । प्रहरीका अनुसार एक बर्ष भित्रमा ५५ केजी चरेश र ८ हजार ३ सय ८ थान एम्पुल समेत बरामद भएको छ ।
जिल्लामा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जानाले लागुऔषध सम्बन्धी मुद्धाको संखयामा बृद्धी भएको प्रहरीको भनाई छ । बरामद गरिएका लागुऔषधहरु धेरै जसो यात्रुबाहक बसबाट बरामद गरिएको प्रहरी निरिक्षक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताए । लागु औषधको बिक्रि गर्ने र ओसारपोसार गरेको भए कम्तिमा दुई बर्ष जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
जनचेतनाको अभाव , पश्चििमी सस्कृतिको प्रभाव र खराव संगतका कारण जिल्लामा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको हो । लागुऔषध दुव्र्यसनीहरुको संख्या घटाउृन सरकारी र गैरसकारी तवरबाट निरन्तर पहल हुदै आएपनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । प्रहरी निरिक्षक अधिकारीले समाज संगको सहकार्यमा यस्ता कामहरुलाई प्रहरीले निरत्साहित गर्दे लैजाने बताए ।